Dowladda Dhexe iyo maamul goboleedyada oo ku heshiiyey 7 qodob (War-muritiyeed) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Dhexe iyo maamul goboleedyada oo ku heshiiyey 7 qodob (War-muritiyeed)
2nd May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Waxaa saaka magaalada Garowe lagu soo gebagebeeyey shirkii wadatashiga ahaa ee uu dhaxeeyey dowladda Dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo socday muddo labo maalmood ah.
Shirka ayaa waxaa laga soo saaray War-muritiyeed ka kooban 7 qodob oo ku saabsan waxyaabaha la isla gartay.
Waxyaabaha xasaasiga ah ee lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in Shir maamul u sameynta gobollada Dhexe aan laga qeybgelin karin ergo ka socota maamulka Puntland, waxaana Cadaado jooga ergo ka timid qaar ka mid ah degamooyinka Mudug ee Puntlnad hoostaga.
Sidoo kale qodobada xaga amniga ah ee lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ah in Puntland looga qoondeeyay ciidamada xooga dalka ilaa 3,000 askari, iyadoo dowladda dhexe ay xuquuqda ciidankaas la wareegi doonto.
Qodbada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah fulinta iyo hirgelinta heshiisyadii horay loowada galay waxaana lagu heshiiyey in guddi loo saaro si uu dabagal iyo fulin ugu sameeyo qodbadii shirkan iyo kii hore.
Arinta Dastuurka ayaa la isku raacay in guddiga dib u eegista Dastuurka la dhamaystiro xubnaha ka dhiman ee maamulada laga soo xulayo si uu shaqiisa uguto dibna u eego qodobada lagu muran san yahay.
Sidoo kale, marka la eego barnaamijka Hiigsiga 2016 ayaa lagu heshiiyey in dowladdaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda Dhexe ay kawada shaqeeyaan sidii dalka u gaari lahaa doorasho xor ah sanadka 2016.
Waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamauud, iyo madaxweynayaasha maamullada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Juba, C/weli Gaas, Shariif Xasan iyo Axmed Madoobe.
Mas’uuliyiintaan ayaa sheegay iney soo dhaweynayaan warmurtiyeedka ay soo saareen guddiyadii matalayey afarta dhinac oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku shirayey magaalada Garowe.
War-murtiyeedka waxaa warbaahinta u aqriyey afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya, Da’ud Aweys, wuxuuna u dhignaa sidan:-
Xog: Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka u yaalla Jabuuti oo halis ku jira
Madaxweyne Xasan, Axmed Madoobe iyo Shariif Xasan oo ka duulay Garowe